အရှင်အာနန်ဒါ Rev Friedrich V Lustig က အင်ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ပေးခဲ့တဲ့ရှေးခတ်မြန်မာကဗျာလက်ရွေးစင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » အရှင်အာနန်ဒါ Rev Friedrich V Lustig က အင်ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ပေးခဲ့တဲ့ရှေးခတ်မြန်မာကဗျာလက်ရွေးစင်
Posted by Kyaemon on Jun 22, 2013 in Arts & Humanities, Cultures, Education, Literature/Books, Poetry | 10 comments
Ancient Poems Myanmar Classical Poems Myanmar Poetry Poetry Rev Friedrich V Lustig
အရင် မိတ်ဆက်ပေးရ မှာပါ၊
ထူးလဲထူးခြားတဲ့ အခြားနိုင်ငံက ရဟန်းတပါးပါ၊
ပြီးတော့မှ သူဘာသာပြန်ခဲ့တဲ့အဲဒီကဗျာတွေကို တင်ဆက်မှာပါ၊
ပုံတွေကို Internet အင်တာနက် က ရတာပါ၊
သက်ဆိုင်ရာ အသီးသီးကဘဲ ပိုင်ကြတာပါ၊
Rev Friedrich V Lustig/အရှင်အာနန်ဒါ ဟာ Estonia
အက်စ်တိုးနီးယားနိုင်ငံက ဗုဒ္ဓ ဘာသာဘုန်းကြီးပါ၊
အမြင်ဆန်းသော်လည်းဘဲ၊ဂျပန်နဲ့တိဗက် က ပါဝင်တဲ့
မဟာယာန ဂိုဏ်းခွဲအသေးလေး တခုမှာ
ကမ်ဘာ့အဆင့်ရှိဗုဒ္ဓ ဘာသာ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှာရော
Estonia နဲ့Latvia နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကဗုဒ္ဓ ဘာသာတွေကိုကိုယ်စားပြုတဲ့
(Lithuania နိုင်ငံကိုလဲကိုယ်စားပြုတယ်လို့နောက်ဆောင်းပါးတခုက ဆိုပါတယ်)
မိမိရဲ့ Estoniaဘာသာစကား အပြင်၊
အရှင်အာနန်ဒါ က ၁၉၁၂ ဧပြီလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် Estonia နိုင်ငံNarvaမြို့မှာ ဖွားမြင်ပြီး
၁၉၂၇ နှစ်တွင်(အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်မှာဘဲ) Narva Gymnasium အားကစားကျောင်းက အောင်မြင်ခဲ့တာ
(ငယ်ရွယ်သော်လည်းဘဲ) အဲဒီနှစ်မှာဘဲ Narva မြို့သတင်းစာ ကသူ့ရဲ့ကဗျာတွေကိုထုတ်ဝေပုံနှိပ်(ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြု)ခဲ့တယ်
Voldemar Friedrich Lustig, the second Buddhist in Estonian Buddhist history, was born on 26 April 1912. Lustig graduated from Narva Gymnasium in 1927 and his first poem was published inaNarva newspaper the same year.
ဗုဒ္ဓဘာသာတရားဟောပြောရင်းRev (Karlis Tennysons aka) Tonisson ဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမိလို့
While giving lectures on Buddhism in Narva, Tõnisson met Lustig, who became his disciple and companion till the end of his life.
Estonica.org – The Beginning of Buddhism in Estonia: Friedrich Lustig
၁၉၃၁ခုနှစ်တွင် ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးတို့က ဥရောပတိုက်ကနေ တိဗက်ကို ဦးတည်ကာ
၁၉၃၅ – ၁၉၃၆ တနှစ်ခွဲသီတင်းသုံးခဲ့တာ၊
In 1931, Tõnisson and Lustig started their journey by foot through Europe to Asia, hoping to go to Tibet, and in 1935–1936 they spentayear andahalf in China.
ဒုတိယ ကမ်ဘာစစ်ကြီးတွင်ယိုးဒယားဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ သီတင်းသုံးကြစဉ် ၁၉၄၁ က
၁၉၄၉ တွင်သူတို့နှစ်ပါးစလုံးကို မြန်မာပြည်သို့ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခဲ့တာ၊
During the Second World War they stayed in Thai monasteries. In 1941, Tõnisson and Lustig openly criticised the politics of the Thai government in local newspapers because of Thailand’s support of Japan, and the renaming of Siam as Thailand, which they took as backing away from Siam’s Buddhist cultural heritage. In 1949, the Thai government exiled Estonian monks to Burma.​
In 1956, Tõnisson and Lustig participated in the Fourth International Buddhist Conference in Kathmandu in Nepal, and they came into contact with lamas from Buryatia, who for the first time had left Buryatia.
၁၉၆၂ မေ ၉ ရက်နေ့မှာ ဆရာဘုန်းကြီး Tonnison ခေါ်Tennyson ကပျံလွန်တော်မူပြီး၊မြန်မာသံဃာ တို့ကသူ့ကို Bodhisattva ဘုရားလောင်းအဖြစ် အထူးတလည် ဂုဏ်ပြုအသိအမှတ်ပေးခဲ့တာ၊
​Tõnisson died on9May 1962 in Burma, where he was seen asaholy man. After his death, he was proclaimedaBodhisattva – an honour that is very rare in Hinayana Buddhism.
So Estonians got their first religious saint, their own Bodhisattva. Until their death, Tõnisson and Lustig were officially the representatives of Baltic Buddhists to the Western world, as the 13th Dalai Lama had named Tõnisson the first Buddhist Archbishop of Estonia, Latvia and Lithuania.
ရုရှား က Estonia ကိုအုပ်ချုပ်စဉ်က မိမိရဲ့ အရပ်သူအရပ်သားတွေ နဲ့အဆက်ပြတ်ရကာ အရှင်အာနန်ဒါက ၁၉၈၉ ဧပြိ ၄ ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်မှာဘဲဘဝနတ်ထံပျံလွန်တော်မူခဲ့တယ်၊
As Estonia was occupied by the Soviet Union, they could not maintain contact with people in their homeland, and there were no other Buddhists in Estonia, as all religious activity was officially forbidden. On4April 1989 Lustig died
Australia ရောက် Estonia နွယ်ဘွားအသင်းကြီးက
မြန်မာပြည်ပ က ပရိသတ်ကိုကြည့်ခွင့်မပြု
(လင့်ခ link က အောက်မှာပါ၊
အဲဒီlink လင့်ခ က ပြည်ပရောက်သူတွေ
တစ်ခါမှ မဖတ်ဖူးတဲ့ အကြောင်းတွေပါလား……….
ပို့စ်တစ်ခုလုံးမှာ အကြိုက်တွေ့ဆုံးကတော့ မျက်မှန်လေးနဲ့ ဆေးတံခဲနေတဲ့ပုံပါပဲ….
ကဗျာ တွေ ရော
ပုံ ရိပ် တွေ ပါ
ခံ စား သွား ပါ တယ် ဗျ ။
ကိုရင် သခင် mobile
ကိုရင်အလင်း ဆက် တို့ရေ
အနော်လည်း ဘွတ်မာ့ခ်လုပ်လိုက်ပါတယ်ရှင့်… တင်ပေးတာ ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်နော်…
ဒါကိုဖတ်ရင်း.. ဂေါတမဗုဒ္ဓမှာ မုတ်ဆိတ်ကျင်ဆွယ်ရှိမရှိ.. အကြီးအကျယ်ဖြစ်… အငြင်းပွားကြတဲ့.. မြန်မာထေရ၀ါဒဆရာတော်ကြီး၂ပါးအကြောင်း.. သတိရမိတယ်…။
စဉ် ရှေး … ဟို၊
နောက်မှ သေချာဖတ်ကြည့်ရဦးမယ် …
ဖီလ်တစ်မျိုး ဖြစ်သွားသားကလား …
ပုံအကြီးနဲ့ကြည့်နိုင်ဘို့ဒီပုံတွေကို Click ‘ကလစ်’ နှိပ်ပါ၊
အအား တောင် သင့် သွားလိမ့်မယ်၊
မြန်မာကဗျာစာသားပုံတွေကိုလဲ Click ‘ကလစ်’ နှိပ်ပါ၊
(၂ပုံတွဲ အတွက် အပေါ်ပိုင်းကိုတခါ၊
ကြေးမုံဂျီးရော မုတ်ဆိတ်နဲ့လား… ခြစ်စရာဂျီး နေမှာဗဲနော်.. ကျိဂျင်သား.. ဓ့ါပုံရှိရင် တင်ပေးပါ…